चीन अपग्रेड गरिएको स्ट्रांग इलेक्ट्रॉनिक माउस रिपेलर गिलहरी रेपेलेन्ट एंटी रैट मच्छर किलर कीटनाशक रिपेलर मच्छर अस्वीकृति कन्ट्रोल ट्र्याप कारखाना र निर्माता | जिन्जिiang
उत्पत्तिको स्थान: गुआंग्डोंग, चीन
ब्रान्ड नाम: DY, DY
मोडेल संख्या: DY-107
नेट तौल: ≤०..5 केजी
खुशबू: कुनै पनि होइन
कीट प्रकार: एन्ट्स, माहुरीहरू, बीटलहरू, बोरर, इरविग्स, फ्लाईहरू, होर्नेट्स, चूहों, माउस
क्षमता: १, १००००० - १००००००
लागू क्षेत्र: १००-१50 square वर्ग मिटर
समय प्रयोग:> 8080० घण्टा
प्रयोग गर्नुहोस्: पशु नियन्त्रण, फार्म, कीट नियन्त्रण, लामखुट्टे भगाउने ब्रेसलेट, लामखुट्टे को विक्रेता स्टिकर, Neatening / भण्डारण, बिरुवाहरु र बगैचा, घर र परिधि, SANITARY, गन्ध हटाउने / Dehumidization, बेकिंग मैट, कूलि,, ड्रि, / फूड, थर्मल
शक्ति स्रोत: इलेक्ट्रिकल
विशिष्टता:> Pie० टुक्रा
चार्जर: लागू छैन
पाना आकार: X २X63XX6363MM मिमी
पावर आपूर्ति: निर्मित रिचार्जेबल ब्याट्री
उपयोग: उन्नत अल्ट्रासोनिक रोडेन्ट रिपेलिंग प्रणाली
स्मार्ट प्रकार: आवाज नियन्त्रण
अवसर: भोज, विवाह र सage्लग्नता, विवाह, स्नातक
ब्याट्री आवश्यक: होईन
आफ्नै ब्रान्ड: हो
अनुप्रयोग: कार्यालय, बेडरूम, बैठक कोठा, भान्छा, इनडोर, आउटडोर, धुलाई क्षेत्र, बाल्कनी, भोजन कक्ष, बाथरूम, हलवे, भित्ते ठाउँ
स्मार्ट उपकरण हो: हो
सत्र: A / W
उत्पादको नाम: लामखुट्टे को विक्रेता कंगन
आपूर्ति क्षमता: प्रति दिन १००० टुक्रा / टुक्रा
मात्रा (टुक्रा) १ -। - - १० > १०
Est। समय (दिन) 8 15 कुराकानी गर्न
भुक्तानी सर्तहरू: L / C; D / A; D / P; T / T; वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम
आपूर्ति क्षमता: 1000.0 प्रति दिन Peice / Peices
अवसर: पार्टी, विवाह र सगाई, विवाह, स्नातक
उर्जा स्रोत इलेक्ट्रिकल
नाम उन्नत अल्ट्रासोनिक रोडेन्ट रिपेलिंग प्रणाली
रंग कार्बन ग्रे स्टील खैरो
[रोडन्ट रिपेलिंगको लागि समर्पित]: बजारमा अन्य कीटनाशक रिपेलरले जस्तो नभई, हाम्रो अल्ट्रासोनिक माउस रेपेलेन्ट चूहों, चूहों, गिलहरी र अन्य कृन्तकहरूलाई लक्षित गर्न डिजाइन गरिएको हो। चूहोंको नियन्त्रणले हाम्रो उत्पादन प्रयोग गरेर राम्रो परिणाम प्राप्त गर्नेछ।
[ट्विन मोड अपरेसन]: अल्ट्रासोनिक कृन्तक विकर्षकले पछिल्लो स्मार्ट चिप प्रयोग गर्दछ र यसमा दुई मोड अपरेशन हुन्छ। बिभिन्न मोडहरूले फरक ध्वनी तरंगहरू उत्सर्जन गर्दछ। चूहों विकर्षकबाट ध्वनि तरंगहरूले माउसको टोरी सिस्टमन्ड मस्तिष्कलाई उत्तेजित गर्दछ। मूस, चूहों, गिलहरी र अन्य कृन्तकहरू आवाज उठाउन सक्दैनन् जसले गर्दा तिनीहरूले तपाईंको घर छोड्नेछन्।
[१००% मानव र घरपालुवा जनावरहरुका लागि सुरक्षित]: कुनै रसायन, कुनै मार्ने छैन। यो अल्ट्रासोनिक चूहों विकर्षक एबीएस ज्वाला retardant सामग्री, टिकाऊ र वातावरण अनुकूल छ। यो तपाइँको बच्चाहरु र घरपालुवा जनावर लाई नोक्सान गर्दैन। र यसले यी मार्दैन जनावरहरू, तिनीहरूलाई तपाईंको घर बाहिर जान दिनुहोस्।
[विस्तृत प्रभावी कभरेज]: हाम्रो चूहों रिपेलरको प्रभावकारी दायरा १ 155००० वर्ग इन्च छ। यो बेडरूम, भान्छा, हॉल, गोदामहरू, कार्यालयहरू, होटेलहरू, आदिमा व्यापक रूपमा प्रयोग गरिन्छ। हामी सिफारिस गर्दछौं कि तपाईले प्रत्येक कोठाको लागि एक रप्टेल रिपेलर स्थापना गर्नु हुन्छ किनकि अल्ट्रासाउन्ड। भित्ता र ठोस प्रवेश गर्न सक्दैन।
के स-साना कृन्तकहरूले तपाईंको घर, गोदाम, पसल वा कार्यालयको स्थानमा लगातार आक्रमण गर्छन्? के तपाईंको घरमा गिलहरीहरूले तार काट्छन्? कुनै समस्या छैन, हामी तपाईंलाई तिनीहरूसँग लड्न एक नवीन आविष्कारको प्रस्ताव गर्न तयार छौं - अल्ट्रासोनिक माउस रिपेलर। कृन्तक रिपेलरले अल्ट्रासोनिक तरंगहरू उत्सर्जन गर्दछ। बिभिन्न फ्रिक्वेन्सीज, जुन कृन्तकहरु टाढा ड्राइभ गर्न सक्दछ। यो उपकरण कुनै पनि कोठामा राख्न सकिन्छ र यसले कामको बखत विषाक्त पदार्थ प्रयोग गर्दैन।
सुरक्षा उपकरणहरू: निर्मित फायरप्रूफ ट्या tank्क
इनपुट फ्रिक्वेन्सी: 25-65kHz
इनपुट भोल्टेज: 90V-250V
आकार: * २ * 73 73 * m मिटर
अपरेटिंग तापमान: -१ C सेल्सियस -60० सेल्सियस
पेरेटिंग तापमान: -१० सेल्सियस ~ C० सेल्सियस
अपरेटिंग आर्द्रता: 85 85% भन्दा कम RH भन्दा कम
प्यारेटिंग आर्द्रता: 85 85% भन्दा कम RH
१. कृपया कार्पेट, कर्टौं र कुनै पनि ध्वनि अवशोषण सामग्रीबाट दूरी राख्नुहोस् जसले कीटनाशक रिपेलरको प्रभावलाई कम गर्न सक्छ।
२. अल्ट्रासोनिक चक्राउने विकर्षकको दुई मोड अपरेशन हुन्छ: मोड १ (पहेलो बत्तीहरू बिस्तारै ब्लीinks्गहरू), मोड २ (रातो र पहेंलो बत्तीहरू वैकल्पिक रूपमा पलकले बज्दछ)। हामी मोड १ सुन्न सक्दैनौं तर मोड २ मानव कानले सुन्न सक्दछ। यो सिफारिस गरिएको छ। मोड २ प्रयोग गर्न जब एकमा त्यो घरमा हुन्छ।
Strong. कडा घोलकहरू, पानी वा नमर्ने कपडा सफा गर्नको लागि नम कपडा प्रयोग नगर्नुहोस्।
प्लग प्रकार: युएस प्लग, यो क्यानडा, भारत, जापान, मेक्सिको, थाईल्यान्ड, ताइवान, संयुक्त राज्य अमेरिका, फिलिपिन्स र अन्यमा लागू हुन्छ।
१ * रोडेन्ट रिपेलर
केवल माथिको प्याकेज सामग्री, अन्य उत्पादनहरू झुकाइएको छैन।
नोट: लाइट शुटि and र बिभिन्न डिस्प्लेको कारणले चित्रमा भएको वस्तुको र causeको कारण वास्तविक चीज भन्दा भिन्नै हुन सक्छ। मापन अनुमति दिईएको त्रुटि +/- १- 1-3 सेमी
Q1: MOQ के हो?
A1: 200PCS हाम्रो आफ्नै उपलब्ध डिजाइनहरूको लागि।
Q2: मँ उत्पादन को लागी एक नमूना अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ?
A2: हो, हामी परीक्षण र गुणस्तर जाँच गर्न नमूना आदेश स्वागत गर्दछौं। मिश्रित नमूनाहरू स्वीकार्य छन्।
Q3: नेतृत्व समयको बारेमा के छ?
A3: नमूनालाई -5- days दिनहरू आवश्यक पर्दछ, ठूलो मात्रामा उत्पादन समय १-२ हप्ता आवाश्यक मात्राको लागि आवश्यक हुन्छ।
Q4: तपाईं कसरी सामान ढुवानी गर्नुहुन्छ र यसले आउन कति समय लिन्छ?
A4: हामी सामान्य रूपमा DHL, UPS, FedEx वा TNT द्वारा जहाज गर्दछौं। यसले प्राय: 9-Day दिन लिनको लागि लिन्छ। एयरलाइन र समुद्री शिपिंग पनि वैकल्पिक हो।
Q5: के उत्पादमा मेरो लोगो प्रिन्ट गर्न ठीक छ?
A5: हो, कृपया हामीलाई उत्पादन भन्दा पहिले औपचारिक रूपमा सूचित गर्नुहोस् र पहिलो नमूनाको आधारमा डिजाइनको पुष्टि गर्नुहोस्।
Q6: के तपाइँ उत्पादनहरूको ग्यारेन्टी प्रस्ताव गर्नुहुन्छ?
A7: पहिले हामीलाई तपाईंको आवश्यकताहरू वा अनुप्रयोगबारे हामीलाई जानकारी दिनुहोस्। दोस्रो, हामी तपाईंको आवश्यकता वा हाम्रो सुझावहरू अनुसार उद्धरण गर्छौं। ग्राहकले नमूनाहरू र ठाउँहरू जम्मा गर्दछ औपचारिक अर्डरको लागि। चौथो, हामी उत्पादनको व्यवस्था गर्दछौं।
अघिल्लो: अमेरिकी मानक र यूरोपीय मानक इलेक्ट्रोनिक अल्ट्रासोनिक कीटनाशक विक्रेता माउस रोच मच्छर कीटनाशक विक्रेताको लागि
अर्को: Sweettreats उर्जा बचत अल्ट्रासोनिक कीट रिपेलर चींटी घरेलू इलेक्ट्रोनिक कीटनाशक माउस चूहा जाल कीट
मुसा नियन्त्रण जाल
कम पावर चुम्बकीय रिपेलर इलेक्ट्रोनिक अल्ट्रासोन ...
नयाँ लिस्टि Easy सजिलो प्रयोग कीट नियन्त्रण उपकरण इलेक्ट्रोन ...
२०१ US यूएस / ईयू प्लग पोर्टेबल इनडोर इलेक्ट्रोनिक उल ...